Misoro yeNhau, 22 Kurume 2019
Chishanu 22 Kurume 2019
Misoro yeNhau, Chishanu 22 Kurume, 2019
Misoro yeNhau Dzanhasi Kurume 20, 2019
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutumupengo tropical cyclone Idai kuManicaland.
Misoro Yenhau Dzanhasi Chipiri 19 2019
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vosvika kuManicaland uko mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kusvika nhasi. Vanhu vanodarika makumi mapfumbamwe nevasere vanonzi vashaya kusvika parizvino asi huwandu uhu huri kutarisirwa kukwira zvakanyanya.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Kurume 18, 2019
Vanhu vanodarika makumi masere nevapfumbamwe vafa kuChipinge, Chimanimani neMasvingo nekuda kwedutumupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti Tropical Cylone Idai.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kurume 15, 2019
Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutumupengo remvura nemhepo rinonzi IDAh iro riri kurovawo mamwe matunhu akawanda muZimbabwe
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu , Kurume 14, 2019
Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muzvipatara kunyangwe hurumende iri kuti yawana mari imosvika miriyoni imwe chete yekutenga mushonga.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu , Kurume 13, 2019
Vana chiremba vakuru vanoratidzira pachipatara cheParirenyatwa vachigunun’una nekushaikwa kwezvikwanisiro muzvipatara zvehurumende.
Kurume 12, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri , Kurume 12, 2019
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vopeta musangano wekudyidzana nemutungamiri wenyika yeSouth Africa VaCyril Ramaphosa muHarare nhasi.
Misoro yeNhau, Muvhuro Kurume 11, 2019
Kurume 07, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China , Kurume 07, 2019
Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika zviuru mazana mashanu kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vayo nemamwe makambani neAmerica.
Kurume 06, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kurume 06, 2019
Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika VaJames Manzou vanoti Zimbabwe ine chido chekuumba hukama neAmerica neEU kuti zvirango zvayakatemerwa zvibviswe.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kurume 05, 2019
Nhengo yeMDC inomirira Kuwadzana mudare reparamende VaCharlton Hwende vanosungwa nemapurisa nhasi uko imwe nhengo yebato iri Muzvare Joanna Mamombe vachiendeswa kuChikurubi Remand Prison vose vachinzi vaida kupidigura hurumende.